Xog cusub oo laga helay ninka Soomaaliga ah ee u xiran dilka Sir David Amess (Siyaasi Soomaali ah oo lala xiriiriyey ninka) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Xog cusub oo laga helay ninka Soomaaliga ah ee u xiran dilka...
Xog cusub oo laga helay ninka Soomaaliga ah ee u xiran dilka Sir David Amess (Siyaasi Soomaali ah oo lala xiriiriyey ninka)
(Sussex) 17 Okt 2021 – Ninka ku eedaysan dilkii Xildhibaankii Xisbiga Muxaafidka ee Tory, Sir David Amess, ayaa la sheegay in uu muddo todobaad ka badan qorshaynayey dilkaasi, sida ay ilo amaan u sheegeen Daily Mail.
Booliiska ayaa weli su’aalo waydiinaya ninkan 25-jirka ah ayaa haysta dhalashada Britain, balse wuxuu kasoo jeeda Somalia waxaana la qiyaasayaa inuu weerarkan kaligii qorsheeyey, iyadoo la sheegay in ninkani uu qalliin ka ballansaday degaan doorashada siyaasigan oo uu 17 jeer middi la dhacay.
Ninkan oo la yiraahdo Ali Harbi Ali, isla markaana uu dhalay la taliyihii dhinaca warfaafinta RW Somalia, Harbi Ali Kullane, ayuu aabihii sheegay inuu ”aad uga naxay” arrintan.
Ali, oo la sheegay in uu horay u deganaan jirey degaan doorashada Sir David ee Southend West oo ku taalla Essex, ayaa haatan ku noolaa magaalada London, iyadoo ay booliisku baaritaan ku sameeyeen ilaa 3 cinwaan-guri oo isaga lagu sheegay.
Hay’adaha amniga ayaa Scotland Yard kala shaqaynaya helitaanka xogo dheeraad ah, iyadoo xalay la go’aamiyey in ninkan la sii hayo ilaa Jimcaha soo aaddan, kahor inta aan maxkamad lasoo taagin.
Sir David, 69-jir, oo Xildhibaan ahaa tan iyo 1983-kii, ayaa dadka soo doorta la kulmi jirey labadii todobaadba mar, isagoo xogaha booqashadiisa ku faafin jirey web-ka baarlamanka.
Aabaha eedaysanaha ayaa The Sunday Times ku yiri: ‘Aad baan u naxsan ahay. Ma aha runtii arrin aan filayey ama ku riyoonayey.’
Previous articleTOOS u daawo: SSC Napoli vs Torino, Newcastle United vs Tottenham – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleWarbixin qoto-dheer oo ku saabsan sida ay hadda u jilan tahay siyaasadda Somalia & dalalka dhex boodaya